Ayyaana Irreechaa, ka Bishooftuu irratti dhuminsa dhaqqabeen, maatiileen hedduun finna yokaan firoota isaanii dhaban ni jiran
Magaalaa Godina addaa Oromiyaa, Sandaafaa keessa kan jiraatan Obbo Darajjee Urgii Lidatee kanneen keessaa tokko. Haadha warraa fi ijoollee sagal qabu turan. Garu ayyaana Irrechaa magaalaa Bushooftu keessatti barana gaggeeffame irratti kan hirmaatanii turan - haati warraa isaanii aaddee Asnaaqach Wadaajoo Baalchaa fi Intalli isaanii barattuu kutaa kudha lama kan turte Biraanee Darajjee Urgii du’an boqotanii jiru
Umriin isaanii 60 ta’u kan ibsan Obbo Darajjeen hojii humnaa hojjachuun maatii isaanii kan gaggeessaa turan ta’uu dubbatu.Haati warraa isaaniis hojii wal fakkaataa irratti bobba’anii ijoollee 9 guddisaa akka turan ka dubbatan, Obbo Darajjeen, silaa bor egeer nu gargaartii jechuun kan abdatan intala isaanii fi ka wal-gargaaruun ijoollee isaanii guddisan – haadha warraa isaaniitti ka gaddaa cimaan qabaman ta’uu dubbatu
“Yeroon Hospitaala Bushooftuu dhaqee reeffa lamaan isaanii argadhee fullii isaanii fi mormii isaanii waan ibiddaan karkkarfame fakkaata, waan gurraacha naafxaa fakkaatuutu funyaan isaanii keessaa yaa’aa ture” jedhan, Obbo Darajjeen. “Reeffa isaanii kafana uffatanii fi Amsoolaan maree ergan fudhee galee booda qaama isaanii anatu dhiqe. Qaamii isaanii inni kafanni aguugee akka shunturuu ta’uu irra darbee homaa hin taane. Inni kaan garuu waan gurraachatu irraa hurka tur” jedhu.
Guutummaa marichaa kana cuqaasuun dhaggeefadhaa